Ciyaaraha Epic waxay isku hareeraysaa khubaro caan ah dacwadooda ka dhanka ah Apple | Waxaan ka socdaa mac
Dagaalkan oo ah Ciyaaraha Epic ee ka dhanka ah Apple, waxaan aragnaa horumarka labada shirkadood ay ka gaareen cabashada si wada jir ah loo gudbiyay. Hadda waxaan ognahay in horumariyeyaasha ciyaarta fiidiyowga ay isku hareereeyeen khubaro caan ah si ay u awoodaan inay baabi'iyaan doodaha shirkadda tufaaxa sidaasna ay ku guuleysan karaan dagaalka. Muddo bil ah ayaa ka hartay maxkamadda oo waxaan ku jirnaa fHubso inaad bixiso markhaatiyo.
Epic waxay soo bandhigtay doodaha khubaro aqoonyahano kala duwan ka socda jaamacado caan ah, maadaama uu dacwadiisa lidka ku ah kalsoonida ka qaadayo Apple. Gaar ahaan, khubarada ayaa ku gacan seyray sheegashada Apple ee ah in doorka koowaad ee App Store uu yahay ilaalinta dadka isticmaala. Waxay ku andacoodaan in amniga abku yahay marmarsiinyo uun looga hortagayo dukaamada barnaamijka tartamaya; in goynta Apple hoos u dhigto iibka barnaamijka. Sidoo kale in Apple ay siiso barnaamijyadeeda u gaarka ah faaiido aan cadaalad ahayn ... iwm.
El Dr. David Evans oo ka socda Jaamacadda University College London (UCL) wuxuu yiri:
Isticmaalayaasha Apple iyo Android waxay maalgashadaan qalabka, softiweerka, iyo barashada nidaamyadooda deegaanka. Go'aanka lagu beddelayo nidaamyada hawlgalka waa go'aan lagu dhaqaajinayo nidaamyada deegaanka, taas oo macnaheedu yahay in macaamiisha ay lumin doonaan qiimaha maalgashiyadan ayna tahay inay kuwo cusub sameeyaan. Kharashaadkaas waxay yareeyaan dhiirigelinta macaamiisha inay beddelaan.
Waxa uu u imid inuu yiraahdo waa haddii aan ku haysan lahayn codsi iyo nidaam ciyaar ee ku saabsan Android, markii aan u guurnay Apple, waa inaan mar kale bixinnaa isla wixii aan horay u haysannay, bixin laba jeer isku mid ..
Professor-ka Stanford Economics of Technology Susan athey waxay taageertay doodda kor ku xusan waxayna sii raacisay in sheegashada Apple ee ah in shirkad keliya oo soo saarta oo maamusha App Store aysan run ahayn lagama maarmaanka u ah sugidda amniga:
Apple buunbuunin faa iidada ugu badan ee faa iidooyinka amniga ee habka dhexe ee App Store. Apple waa qiil in laga walwalo nabadgelyada isticmaaleyaasheeda. Dammaanadaha amniga ee iPhone-ka waxaa inta badan fuliya nidaamka hawlgalka. Sababtoo ah Apple App Store iyo geedi socodka dib u eegista la xidhiidha.
Caqli ahaan iyagu waa khubaro ay shaqaaleeyeen Ciyaaraha Epic wax walbana waxaa lagu xalin doonaa maxkamada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Ciyaaraha Epic waxay isku hareeraysaa khubaro caan ah dacwadooda ka dhanka ah Apple